IIMVELISO ZEBHEGI EYAMKELEKILEYO YOMTSHATO EFIKELELEKAYO KWIAMAZON PRIME - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Iimveliso zeBhegi yoKwamkelwa ngexabiso elifanelekileyo zoMtshato eziThengiswayo nge-Amazon Prime Day
Iimveliso zeBhegi yoKwamkelwa ngexabiso elifanelekileyo zoMtshato eziThengiswayo nge-Amazon Prime Day
Ngu: Esther Lee 07/15/2019 ngo-10: 20 AM
Ingxowa yomtshato eyamkelekileyo yindlela entle yokubulisa iindwendwe zakho ngaphambi kwempelaveki egcwele isenzo kude nekhaya. Ngoku ukuba uSuku lweNkulumbuso yaseAmazon ifikile, izibini zinokugcina iimpahla ezifikelelekayo zomtshato kunye neemveliso ezingaziva ziphantsi. Elona candelo lililo? Iindwendwe zakho ziya kubulela kuwe- kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwakho.
Sithembe: uya kufuna ukuthenga amanzi ngobuninzi ngempelaveki yomtshato. Endaweni yokuhamba ngendlela yokubandakanya iibhotile zeplastiki kwimingxunya yakho yomtshato eyamkelekileyo, kutheni ungakhethi ezi zinto zisekwe ephepheni, ezinokuphinda zisetyenziswe eziza kwenza iqhinga ekugcineni iindwendwe zakho zinamanzi kwaye zisempilweni kuyo yonke imithendeleko.
AMANZI NJE, 100% Amanzi entwasahlobo ePremiyamu kwiPhepha eliSebenzayo eliSebenzayo, yayiyi- $ 20.89, ngoku isaphulelo se5%, Amazon.com
Eyona ndlela ilunge kakhulu, ene-caffeine yeendwendwe zezi zikhetho zintle ze-espresso ezivela e-Illy. Ezi ziselo zenziwe nge-100 yeepesenti yekofu yeArabica enokuthi izihlobo zakho kunye namalungu osapho bakwazi ukuyitya ngokulula xa besendleleni yokuqubha okanye kwi-brunch.
Ukulungele Ukusela iCaffe engadlwanga, i-12 yokubala, yayiyi- $ 32.68, ngoku i-5% isaphulelo, Amazon.com
Iindwendwe zakho zinokufuna ukungabinanto encinci yokutya phakathi kokutya, ke qiniseka ukuba zihlala zondlekile impelaveki yonke ngezi tshokholethi imnyama kunye neebhotolo zebhokhwe.
Oku kusindisa ubomi kwiBhari yesidlo sakusasa, ityhokolethi emnyama kunye nebhotolo yamandongomane, ukubala okungama-12, yayiyi- $ 20.42, ngoku isaphulelo esili-5%, Amazon.com
I-Gum inokuphazamisa ngakumbi ngexesha lomsitho, ke nikela ezi bhola zetyelethi zipakishwe njengokhetho lokuhlaziya umoya weendwendwe.
I-CrazyOutlet Bobs inyibilika kude ne-Mints, i-2 yeepawundi, yayiyi- $ 9.59, ngoku ikhutshiwe i-20%, Amazon.com
umakhulu kamtshakazi unxibe imifanekiso
Ukuba iindwendwe zakho zixakekile ezindlwini, thatha inyathelo elongezelelekileyo lokubuka iindwendwe ngokugcina iifriji zazo ngesisombululo se-electrolyte ukunqanda ukomisa emzimbeni emva kobusuku bokuba nepati. Esi sisombululo sediliya sinikezelwa ngexabiso lesaphulelo kwi-Prime Day, esenza umtshato wakho wamkeleke iibhegi ezifikelelekayo kwaye zitshiphu kunesiqhelo.
Unonophelo olusisiseko i-Electrolyte Solution, Ngaba yayingu-8.43 yeedola, ngoku i-5% isaphulelo, Amazon.com
Ukuba iindwendwe zakho zihlala kumakhaya angaphandle kweendawo ekuchithelwa kuzo iiholide, sicebisa ukubandakanya izibonelelo abanye babahlobo bakho kunye namalungu osapho abanokuthi bazilibale ngenye indlela. Thatha, umzekelo, ezi brashi zamazinyo zilahlwayo zipakishwe ngokukodwa kwaye zifumaneka ngobuninzi. Uya kufumana i-148 enkulu-yentloko, iibrashi zamazinyo eziphakathi.
Avistar Iibhulashi zamazinyo ezilahlwayo ezilahlwayo, ukubalwa kwe-148, yayiyi- $ 35.73, ngoku i-35% isaphulelo, Amazon.com
Akukho mntu ufuna undwendwe olugulayo. Ityala ngalinye liza neebhotile ezingama-36 ezilungele ukuhamba ukuze iindwendwe zakho zikwazi ukubasa nazo ekhaya.
I-Purell Advanced Hand Sanitizer Soothing Gel, ukubala okungama-36, Ngaba yayiyi- $ 43.22, ngoku i-20% isaphulelo, Amazon.com
Isithambisi semihla ngemihla
Ukubamba umtshato wangaphandle okanye impelaveki yomtshato waselwandle? Iindwendwe zakho ziya kubulela kule ndlela yokunyibilikisa equka i-SPF. Kwaye ezi ziza kwipakethe ezintandathu.
I-Mountain Falls yemihla ngemihla yobuso be-Moisturizer Ebanzi ye-Spectrum ye-UVA / i-UVB ye-SPF ye-15 ye-sunscreen, yayiyi- $ 33.98, ngoku i-10% isaphulelo, Amazon.com
Ukuba usiya kwimozulu eshushu okanye kwindawo efudumeleyo kwimpelaveki yomtshato (okanye nayiphi na imicimbi enxulumene nomtshato), cinga ukupakisha ezi zinto zokuthambisa ilanga ze-SPF 50 kwi-Solimo yaseAmazon yangaphakathi.
I-Solimo General Protection Continuous Spray ye-sunscreen, yayiyi- $ 16.62, ngoku isaphulelo se-5%, Amazon.com
Yakha indlu yonke imveliso emangalisayo oyibhale kwingxowa enye ekumgangatho ophezulu. Olu khetho luqulathe iphepha le-100 lephepha elinokuxhasa ukuya kuthi ga kwiipawundi ezili-10 zobunzima (amanzi, i-sunscreen nokunye). Kwaye, iphepha linokuphinda linokuphinda lisetyenziselwe ukuphinda lisebenze, lihlaziyeke kwaye unokwenza ibhegi nganye ngokwezifiso kunye ne-monogram yakho yomtshato nokunye.
IiPhepha eziPhezulu zePhepha eziPhetheyo, ukubalwa kwe-100, Ngaba yayiyi-19 yeedola, ngoku i-5% isaphulelo, Amazon.com
Ukuba ukhetha ukugcwalisa iibhegi zeetote endaweni yoko, yiya ngokhetho olunokuphinda lusetyenziswe lomqhaphu.
Ikotoni engenanto enokuphinda isebenze iingxowa zeTote, ukubala okungama-24, kwaba ngama- $ 43.96, ngoku kungaphezulu nge-20% isaphulelo, Amazon.com
Apha ukulwa nale micimbi mincinci, iblisters okanye amaqhuma ngaphezulu kwayo nayiphi na impelaveki yomtshato zezi bhandeji zibhetyebhetye zibalulekileyo ziya kuba luncedo kakhulu kwiindwendwe zakho.
Zonke iiMpilo zeAntibacterial Flexible Bandages, 200 count, Was $ 10.44, Now a extra 5% off, Amazon.com
Yenye yezona zinto zingahoywanga ukupakisha kwiingxowa zokuphuma ngeempelaveki, yiyo loo nto iindwendwe zakho ziya kukubulela ngokubandakanya ezi zinto ziphilisayo.
I-Naturistick Yonke-i-Beeswax ye-Lip Balm, i-32 count, yayingu- $ 28.47, ngoku i-5% eyongezelelweyo, Amazon.com
Ukuthambisa ukususa ubuso
Emva kobusuku obude bokuzonwabisa, ezi zinto uzisulileyo ebusweni ziya kwenza inkohliso kwiindwendwe zepati ezidiniweyo ezifuna imizuzu embalwa yokulala. Bancede ukutsiba inyathelo kubuhle babo bobusuku ngokunikezela ngezi zinto zisusa ukwenziwa kwe-hypoallergenic kunye nedermatologist evunyiweyo.
I-Solimo Makeup isusa ubuso wosula, ukubala okungama-25 kunye nepakethi yesithandathu, yayingu- $ 18.04, ngoku isaphulelo se-5%, Amazon.com
Khusela kuqala! Ayisiyonto oyakuyifaka kuyo le yonke ibhegi yamkelekile, kodwa kubalulekile ukuba ubenezi zinto ezandleni. Amaqabane aya kufuna ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zawo ziyaxelwa ukuba kukho naziphi na izigaqa kunye nezinto ezikhutshwayo ezenzeka emva kobusuku bokuzibandakanya nzima kumgangatho wokudanisa.
Uncedo lokuQala kuphela ngama-299 isiqwenga seNjongo yoNcedo lokuQala, Ityala elithambileyo, yayiyi- $ 15.87, ngoku ipesenti ye-15 icinyiwe, Amazon.com
Ukubhengezwa: Esi sithuba siqulathe amakhonkco onxibelelwano, amanye kuwo anokuxhaswa ngokuhlawula abathengisi.
Iimpahla ezifanelekileyo zokubandakanya iifoto
Umtshakazi kaDavid ugcine imihla
indlela yokubopha iqhina lomoya elipheleleyo